ဒူဒူကြီး: Critical area in double hull tanker - (၁)
double hull tanker သဘေ်ာတွေရဲ့ tank structure မှာ၊ ပျက်စီးမှု failure ဖြစ်ပွားပေါါပေါက်နိုင်တဲ့၊ critical area နေရာတွေရှိပါတယ်။ stress concentration effect, misalignment/ dis-continuity effect နဲ့ corrosion effect တို့ သက်ရောက်နေတဲ့၊ နေရာတွေဟာ သတိပြုရမယ့် "critical area" တွေဖြစ်ပါတယ်။ corrosion ဖြစ်ပွားနေပြီး၊ မြင့်မားတဲ့ higher stress တွေသက်ရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာ ကြီးမားတဲ့အက်ကွဲမှု higher degree of cracking သို့မဟုတ် buckling လို့ခေါါတဲ့ တွန့်ခေါက်ကာ ပုံသဏ္ဍန်ပျက်ယွင်းမှု deformation တွေဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။ သဘေ်ာတည်ဆောက်စဉ် construction process ကာလအတွင်း၊ misalignment and dis-continuity effect ကြောင့်၊ အပျက်အစီးတွေ ဖြစ်ပေါါလေ့ရှိပါတယ်။
Fig. Cargo tank corrosion
corrosion effect ဟာ အလျှားလိုက် horizontal surface မျက်နှာပြင်တွေမှာ၊ ဖြစ်ပွားပေါါပေါက်လေ့ ရှိပါတယ်။ ရေနံစိမ်း crud oil နဲ့ ရေနံထွက်ကုန်ပစ္စည်း petroleum products တွေအတွင်း၊ ရောနှော ပါဝင်နေလေ့ရှိတဲ့ residual water တွေနဲ့ tank တွေကိုဆေးကြောခြင်း 'tank cleaning' ဆောင်ရွက်ရာမှ၊ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ရေတွေဟာ၊ transverse bulkhead ရဲ့ horizontal girders တွေနဲ့ inner bottom တို့အကြားနေရာတွေမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဆေးမသုတ်ထားတဲ့ un-coated area တွေအဖြစ် ရှိနေမယ်ဆိုလျှင်၊ plate wastage ဆိုတဲ့ သံပြားဆွေးမြေ့ပျက်စီးမှုတွေ၊ အလွယ်တကူ ဖြစ်ပွားပေါါပေါက်နိုင်ပါတယ်။ cargo tank တွေအတွင်း၊ ထည့်သွင်းအသုံးပြုတဲ့ 'inert gas' ဟာ သံပြားဆွေးမြေ့ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါါခြင်းကို၊ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် tank အတွင်းမှ 'ရေ' အကြွင်းအကျန် residual water တွေနဲ့ inert gas အတွင်းပါဝင်နေတဲ့ sulphur တို့ပေါင်းစပ်မိတဲ့အခါ၊ သံချေးတက်စေမယ့် corrosion fluids တွေဖြစ်ပေါါလာနိုင်ပါတယ်။
Fig. Ballast tank corrosion
သဘေ်ာရဲ့ ballast tank တွေမှာ hard coating အဖြစ်ဆေးသားအထူသုတ်ကာ၊ corrosion protection ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အပြင်၊ sacrificial anodes တွေတတ်ဆင်ပြီး၊ 'corrosion protection' ကို ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ sacrificial anodes တွေကို တတ်ဆင်ပြီး၊ corrosion ကိုလျှော့ချရာမှာ anode ဟာ 'immersed' အနေနဲ့ ရေထဲမှာလုံးဝနစ်မြုတ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆေးမသုတ်မှီ ဆောင်ရွက်ရတဲ့ surface preparation လုပ်ငန်းစဉ်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း၊ တိကျစွာဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ coating system အား၊ ထိရောက်စွာအကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ DWT တန် (၅၀၀၀) နဲ့အထက်၊ double bottom tanker တွေတည်ဆောက်တဲ့အခါ၊ coating system အား၊ ထိရောက်စွာအကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ရန်အတွက် IMO ရဲ့ Maritime Safety Committee မှ၊ MSC 215(82) resolution နဲ့ MSC. 288(87) resolution တို့ကို၊ SOLAS Chapter II-1/ 3-2 regulation အဖြစ်ပြဌာန်းထားပြီး၊ "Performance Standard for Protective Coating" လို့ခေါါပါတယ်။ coating system ဟာ intact အနေနဲ့ ထူထဲ လုံလောက်စွာရှိနေခဲ့လျှင်၊ corrosion ဖြစ်ပွားမှုကို တားဆီးပေးနိုင်ပေမယ့်၊ coating breakdown ဆိုတဲ့ ဆေးသားကွာကျမှု စတင်ဖြစ်ပေါါတာနဲ့ လျှင်မြန်တဲ့ accelerated corrosion တွေ ချက်ခြင်း ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ stress concentration effect နဲ့ အထပ်ထပ်အခါခါ အက်ကွဲမှု cyclic loading crack တို့ကြောင့် ဆေးသားကွာကျမှုတွေ၊ ပေါါပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ပျက်စီးမှု failure ဖြစ်ပွားပေါါပေါက်နိုင်တဲ့၊ critical area နေရာတွေကို၊ သဘေ်ာရဲ့ dead weight အပေါါအခြေခံပြီး၊ ခွဲခြားဖော်ပြပါဦးမယ်။
Fig. Areas susceptible to stress concentration and misalignment of below 20, 000 DWT double hull/ double bottom tanker
(၁) - double hull tanker သဘေ်ာတွေရဲ့ tank structure မှာ၊ stress concentration နဲ့ misalignment effect ကြောင့် ပျက်စီးမှု failure ဖြစ်ပွားပေါါပေါက်နိုင်တဲ့ "critical area" တွေကတော့ mid-hold transverse section နဲ့ transverse bulkhead နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး၊ DWT တန်ချိန် (၂၀, ၀၀၀) အောက်သဘေ်ာတွေရဲ့ primary structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement မှာ (၁) - mid-hold transverse section ရဲ့ longitudinal bulkhead နေရာတွေနဲ့ (၂) - primary web ရဲ့ inner bottom plating နဲ့ transverse framing ရဲ့ end bracket တို့၊ ဆုံတဲ့နေရာတွေကို၊ 'critical area' တွေအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Areas susceptible to stress concentration and misalignment on transverse bulkheads of below 20, 000 DWT double hull/ double bottom tanker
"vertically corrugated bulkhead" မှ (၁) - inner bottom plate နဲ့ corrugation အတွန့်အခေါက် အဆက်နေရာတွေ၊ (၂) - deck plate နဲ့ corrugation အတွန့်အခေါက်အဆက်နေရာတွေ၊ (၃) - deck longitudinal တွေနဲ့ corrugation အတွန့်အခေါက်အဆက်နေရာတွေနဲ့ (၄) - transverse bulkhead နဲ့ horizontal side girders အဆက်နေရာတွေဟာလည်း critical area တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် "horizontally corrugated bulkhead" မှ (၁) - longitudinal bulkhead နဲ့ inner hull plate ရဲ့ corrugation အတွန့်အခေါက်အဆက်နေရာတွေနဲ့ (၂) - transverse bulkhead နဲ့ horizontal side girders အဆက်နေရာတွေဟာလည်း 'critical area' တွေဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Areas susceptible to stress concentration and misalignment on mid-ship section of below 150, 000 DWT double hull/ double bottom tanker without center line longitudinal bulkhead
(၂) (က) - "center line longitudinal bulkheads တွေထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့ DWT တန်ချိန် (၁၅၀, ၀၀၀) အောက်" double hull tanker သဘေ်ာတွေရဲ့ "typical mid-hold transverse section" နေရာတွေနဲ့ "typical transverse bulkhead arrangement" နေရာတွေမှာ၊ higher magnitude stress effect တွေကြောင့်၊ ပျက်စီးမှု failure ဖြစ်ပွားပေါါပေါက်နိုင်တဲ့ "critical area" တွေရှိပါတယ်။ (၁) - lower hopper slopping plate နဲ့ inner bottom plate တို့ဆုံတဲ့နေရာတွေ၊ (၂) - lower hopper slopping plate နဲ့ inner hull plate မှ longitudinal bulkhead တို့ဆုံတဲ့နေရာတွေ၊ (၃) - lower hopper ရဲ့အထက် side web lower panel plate၊ (၄) - topside tank ရဲ့ sloping plating သို့မဟုတ် longitudinal bulkhead နဲ့ deck transverse bulkhead မှ end bracket တို့ရဲ့ အဆက်နေရာတွေ၊ (၅) - topside tank ရဲ့ sloping plating နဲ့ longitudinal bulkheads တို့ရဲ့ အဆက်နေရာတွေနဲ့ (၆) - side shell longitudinal connection နဲ့ side web plating တို့ရဲ့ အဆက်နေရာတွေဟာ၊ "mid-hold transverse section" မှ 'critical area' တွေဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Areas susceptible to stress concentration and misalignment on transverse bulkheads of below 150, 000 DWT double hull/ double bottom tanker
DWT တန်ချိန် (၁၅၀, ၀၀၀) အောက် double hull tanker သဘေ်ာတွေမှာ၊ အတွန့်အခေါက် "vertically corrugated transverse bulkhead" တွေနဲ့ ပြင်ညီ "vertically plane transverse bulkhead" တွေကို၊ အသုံးပြုကာ တည်ဆောက်လေ့ရှိပါတယ်။ အတွန့်အခေါက်ပုံသဏ္ဍန် "vertically corrugated transverse bulkhead" မှာ (၁) - inner bottom plate နဲ့ lower stool အဆက်နေရာတွေ၊ (၂) - lower shelf plate နဲ့ lower stool အဆက်နေရာတွေ၊ (၃) - lower stool shelf plate နဲ့ vertical corrugation အဆက်နေရာတွေ၊ (၄) - upper stool shelf plate နဲ့ vertical corrugation အဆက်နေရာတွေ၊ (၅) - upper stool နဲ့ longitudinal deck girder system အဆက်နေရာတွေ၊ (၆) - side structure မှ lower stool side plating နဲ့ upper stool side plating အဆက်နေရာတွေနဲ့ (၇) - transverse bulkhead နဲ့ horizontal side girder အဆက် နေရာတွေဟာ 'critical area' တွေဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ညီ "vertically plane transverse bulkhead" မှာ (၁) - inner bottom plate နဲ့ vertical stiffening အဆက်နေရာတွေ၊ (၂) - horizontal stringers တွေနဲ့ vertical stiffening အဆက်နေရာတွေ၊ (၃) - horizontal stringers တွေနဲ့ horizontal side girders အဆက်နေရာတွေနဲ့ (၄) - watertight floor plate ရဲ့ lower stool နဲ့ inner bottom plate အဆက်နေရာတွေ သို့မဟုတ် bottom shell longitudinal အဆက်နေရာတွေဟာလည်း၊ stress concentration နဲ့ misalignment effect ကြောင့် ပျက်စီးမှု failure ဖြစ်ပွားပေါါပေါက်နိုင်တဲ့ "critical area" တွေဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Areas susceptible to stress concentration and misalignment on mid-ship section of below 150, 000 DWT double hull/ double bottom tanker with center line longitudinal bulkhead
(၂) (ခ) - "center line longitudinal bulkheads တွေထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့၊ DWT တန်ချိန် (၁၅၀, ၀၀၀) အောက်" double hull tanker သဘေ်ာတွေရဲ့ "typical mid-hold transverse section" နေရာတွေမှာလည်း (၁) - lower hopper slopping plate နဲ့ inner bottom plate တို့ ဆုံတဲ့နေရာတွေ၊ (၂) - lower hopper slopping plate နဲ့ inner hull plate မှ longitudinal bulkhead တို့ဆုံတဲ့နေရာတွေ၊ (၃) - transverse floor plate တွေနဲ့ center line longitudinal bulkhead မှ end brackets တို့ဆုံတဲ့နေရာတွေ၊ (၄) - lower hopper ရဲ့အထက် side web lower panel plate၊ (၅) - center line longitudinal bulkhead မှ topside tank ရဲ့ sloping plating သို့မဟုတ် longitudinal bulkhead နဲ့ deck transverse bulkhead မှ end bracket တို့ရဲ့ အဆက်နေရာတွေ၊ (၆) topside tank ရဲ့ sloping plating နဲ့ longitudinal bulkheads တို့ရဲ့ အဆက်နေရာတွေနဲ့ (၇) - side shell longitudinal connection နဲ့ side web plating တို့ရဲ့ အဆက်နေရာတွေဟာ၊ 'critical area' တွေဖြစ်ပါတယ်။
အတွန့်အခေါက်ပုံသဏ္ဍန် "vertically corrugated transverse bulkhead" မှ (၁) - inner bottom plate နဲ့ lower stool တို့ရဲ့ အဆက်နေရာတွေ၊ (၂) - lower shelf plating နဲ့ lower stool တို့ရဲ့ အဆက်နေရာတွေ၊ (၃) - lower stool shelf plating နဲ့ vertical corrugation အတွန့်အခေါက် အဆက်နေရာတွေ၊ (၄) - upper stool shelf plating နဲ့ vertical corrugation အတွန့်အခေါက် အဆက်နေရာတွေ၊ (၅) - upper stool နဲ့ longitudinal side girders အတွန့်အခေါက်အဆက်နေရာတွေ၊ (၆) - side structure နဲ့ upper သို့မဟုတ် lower spool side plating အဆက်နေရာတွေနဲ့ (၇) - transverse bulkhead နဲ့ horizontal side girders အဆက်နေရာတွေဟာလည်း 'critical area' တွေဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ညီ "vertically plane transverse bulkhead" မှာ (၁) - inner bottom plate နဲ့ vertical stiffening အဆက်နေရာတွေ၊ (၂) - horizontal stringers တွေနဲ့ vertical stiffening အဆက်နေရာတွေ၊ (၃) - horizontal stringers တွေနဲ့ horizontal side girders အဆက်နေရာတွေ၊ (၄) - watertight floor plate ရဲ့ lower stool နဲ့ inner bottom plate အဆက်နေရာတွေ သို့မဟုတ် bottom shell longitudinal အဆက်နေရာတွေ၊ (၅) - center line longitudinal bulkhead နဲ့ horizontal stringers အဆက်နေရာတွေနဲ့ (၆) - center line longitudinal bulkhead နဲ့ transverse bulkhead အဆက်နေရာတွေဟာလည်း၊ stress concentration နဲ့ misalignment effect ကြောင့် ပျက်စီးမှု failure ဖြစ်ပွားပေါါပေါက်နိုင်တဲ့ "critical area" တွေဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Areas susceptible to stress concentration and misalignment on mid-ship section of above 150, 000 DWT double hull/ double bottom tanker with longitudinal bulkheads
(၃) - "center line longitudinal bulkheads တွေထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့၊ DWT တန်ချိန် (၁၅၀, ၀၀၀) အထက် 'double hull tanker သဘေ်ာတွေရဲ့ "typical mid-hold transverse section" နေရာတွေမှာ (၁) - (၁) - lower hopper slopping plate နဲ့ inner bottom plate တို့ ဆုံတဲ့နေရာတွေ၊ (၂) - longitudinal bulkhead နဲ့ double bottom floor panel ရဲ့ hopper အဆက်နေရာတွေ၊ (၃) - lower hopper sloping plate နဲ့ side inner hull plate တို့ဆုံတဲ့နေရာတွေ၊ (၄) - lower hopper ရဲ့အထက်မှ side web lower panel နေရာတွေ၊ (၅) - inner bottom နဲ့ longitudinal bulkhead ရဲ့ vertical transverse end bracket အဆက်နေရာတွေ၊ (၆) - primary bottom bracket web ရဲ့ toe connect နဲ့ inner bottom အဆက်နေရာတွေ သို့မဟုတ် primary bottom bracket web ရဲ့ toe connect နဲ့ longitudinal bulkhead အဆက်နေရာတွေ၊ (၇) - inner hull side နဲ့ wing cargo tank ရဲ့ cross tie အဆက်နေရာတွေ၊ (၈) - inner hull side နဲ့ deck transverse end bracket အဆက်နေရာတွေ၊ (၉) - double bottom floor pillar stiffeners တွေနဲ့ bottom သို့မဟုတ် bottom longitudinal connection အဆက်နေရာတွေနဲ့ (၁၀) - ballast နဲ့ load waterline region နေရာ အကြားမှ side web တွေနဲ့ဆက်ထားတဲ့ side longitudinal connection အဆက်နေရာတွေဟာ 'critical area' တွေဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Areas susceptible to stress concentration and misalignment on transverse bulkhead of above 150, 000 DWT double hull/ double bottom tanker with longitudinal bulkheads
DWT တန်ချိန် (၁၅၀, ၀၀၀) အထက် 'double hull tanker သဘေ်ာတွေမှာ၊ ပြင်ညီပုံသဏ္ဍန် "vertically plane transverse bulkhead" တွေကိုသာတတ်ဆင်တည်ဆောက်ကြပြီး၊ (၁) - inner hull side နဲ့ horizontal stringer အဆက်နေရာ သို့မဟုတ် longitudinal bulkhead နဲ့ horizontal stringer အဆက်နေရာ၊ (၂) - inner bottom နဲ့ vertical stiffening အဆက်နေရာ သို့မဟုတ် horizontal stringer နဲ့ vertical stiffening အဆက်နေရာ၊ (၃) - watertight floor plate ရဲ့ lower stool နဲ့ inner bottom plate အဆက်နေရာတွေ သို့မဟုတ် bottom shell longitudinal အဆက်နေရာတွေနဲ့ transverse bulkhead ရဲ့ ဟိုဖက်ဒီဖက် double side နဲ့ inner hull longitudinal connection အဆက်နေရာ သို့မဟုတ် side shell နဲ့ inner hull longitudinal connection အဆက်နေရာတွေဟာ၊ stress concentration နဲ့ misalignment effect ကြောင့် ပျက်စီးမှု failure ဖြစ်ပွားပေါါပေါက်နိုင်တဲ့ "critical area" တွေဖြစ်ပါတယ်။
Reference Image credit to : “Guidelines for the Inspection and Maintenance of Double Hull Tanker Structures” - Tanker Structure Co-operative Forum 2010 © International Chamber of Shipping, London and Oil Companies International Marine Forum, Bermuda., ကို Aung Htut (AH) - PSPC – 'Performance Standard for Protective Coating' အကြောင်း, http://novaprofile.com/, http://www.acotec.be/